स्थानीय तह निर्वाचनः कुन दलबाट कति भए जनप्रतिनिधि ? « Sansar News
स्थानीय तह निर्वाचनः कुन दलबाट कति भए जनप्रतिनिधि ?
१४ जेष्ठ २०७९, शनिबार १६:१४
काठमाडाैं । स्थानीय तह निर्वाचन सकिएको छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको मतगणनाको अन्तिम परिणाम लगभग आइसकेको छ । बाजुराको बूढीगङ्गा नगरपालिकामा मतदान हुन बाँकी छ भने उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकामा मतगणना जारी छ ।